Toro-hevitra folo dia tokony ho fantatrao - HO AN'NY MPANOMPOANY EYELASH DISO
Fehiloha mink tena vita an-tanana avo lenta: volom-borona mink tena 100% izay vokatra tsy misy habibiana tanteraka. Ny halavan'ny kapoka JM-LSH-S Series anay dia avy amin'ny 0.8-15mm Kofehy landihazo malefaka: Ny tarika landihazo faran'izay malefaka dia 28-30mm lava amin'ny volomaso mink 3D tena izy dia malefaka amin'ny volomaso ...
Diovina ny volomaso sandoka amin'ny alàlan'ny fampiasana fitoeram-plastika!
Fanehoana santionany FAQ Q. 1: Afaka mahazo santionany amin'ny volomaso ve aho? A: Eny, misy ny baiko santionany amin'ny fizahana kalitao sy fitsapana amin'ny tsena. Saingy mila mandoa ny ...
Ataovy madio hatrany ny kapoka famoahana anao ary maharitra elaela indrindra! Nahoana isika no tokony hanadio ny volomaso diso? Ny volomaso sandoka indraindray dia mety ho lafo tokoa, koa mety azonao atao ny mampiasa azy io mihoatra ny indray mandeha. Raha ny momba ny volomaso Felvik False, matetika dia afaka mampiasa hatramin'ny 20-25 fotoana izy raha miaraka amin'ny ...
Tongasoa eto amin'i Felvik - mpamatsy vokatra tokana anao!
Felvik dia orinasan-tarehy manja izay manampahaizana manokana amin'ny volomaso sandoka, fanitarana volomaso ary vokatra mifandraika amin'ny tanjona hanamorana ny orinasanao sy ny mpanjifanao mijery sy mahatsapa ny tsara indrindra amin'ny tenany. Faly be i Felvik fa eto ianao! Na mitady eyela sandoka / diso ianao ...
Inona no atao hoe Mink Lashes?
Betsaka ny karazam-bolo sandoka ao an-tsena: Mink Lashes, Faux Eyelashes, Faux Mink Lashes, eyelashes synthetic, human hair lashes, Horse Hair Lashes, Silk Lashes sns. Mety hampikorontan-tsaina tokoa izany rehefa manandrana manamaivana ny fahasamihafana sy ...
Ahoana ny fomba hampiharana sy hikolokoloana eyelahes hosoka?
Ahoana ny fomba fampiharana? Dingana 1. refesina ny halavan'ny fehikibo ataonao amin'ny alàlan'ny fametrahana azy moramora eo amin'ny hodi-masonao ary manaparitaka fatratra avy any ivelany. Raha lava loatra izy ireo, dia hamorona hodi-mason-droopy mandry izy ireo, ka azafady mba alao antoka fa tonga lafatra sy ahazoana aina ny halavanao ...
Volomaso Silk Felvik
Inona no volomaso landy? Amin'ny ankapobeny, ny Silky Lashes sy ny Mink Lashes dia vita amin'ny fitaovana iray ihany, samy PBT synthetic. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'izy ireo dia tsy amin'ny fitaovany, fa amin'ny endriny, ny fiafarany ary ny lanjany. Silk Lashes manana taper lava kokoa, izany hoe, ny ma ...